Ihe mgbochi ogwu COVID-19: Mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ raara onwe ya nye
Home » Akụkọ Ahụike » Ihe mgbochi ogwu COVID-19: Mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ raara onwe ya nye
ịgba ọgwụ mgbochi zuru ezu
dere Behrouz Pirouz
Ahụ mmadụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, mmetụta ndị a na-atụghị anya ya nke ọgwụ nwere ike ime. O meela na a machibidoro ọgwụ ndị nkịtị a na-ere ere na-achọghị ọgwụ ọgwụ na mba ụwa na mberede.
Ebee ka mmadụ ga - achọta ihe mgbaàmà a na - atụghị anya ya ga - ekwe omume mgbe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 gasịrị?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 500 anatawo ọgwụ mgbochi dị iche iche nke COVID-19, n’ime ha ka nde 135 natakwara ọgwụ nke abụọ.
Nnyocha na okwu ndị a na-ahụkarị dị mkpa, ọkachasị maka okwu ndị kachasị njọ, dị ka o mere mgbe ọnwụ na thrombosis mere izu ole na ole gara aga nke dugara nkwụsị nke AstraZeneca.
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, nke Ranitidine, ọgwụ na-agba ume na-ewu ewu nke achọpụtara na 1976 na iji azụmaahịa kemgbe 1981 onye FDA chọrọ ka ọpụpụ ahịa ahụ otu afọ gara aga. N’ọnọdụ ndị ọzọ, a ka kwere ọgwụ ụfọdụ mana iji ha eme ihe chọrọ nlebara anya pụrụ iche, dịka ọ dị n’ihe banyere “Tamsulosin,” ọgwụ a na-emebu maka prostate nke nwere ike ịmetụta anya, nke chọrọ nlekọta pụrụ iche mgbe onye ọrịa na-a itụ ya ga-enwerịrị cataract ma ọ bụ ịwa ahụ glaucoma.
Ọ bụ ụmụ irighiri ihe nke ndị bi na ya na-eji ọgwụ ndị a eme ihe. N'agbanyeghị nke a, nyocha weebụ maka mmetụta dị n'akụkụ ha ga-achọta ntụaka dị mfe yana maka ọgwụ ndị yiri ya nke na-ejedebe.
Maka ọgwụ mgbochi COVID-19, nke a abụghị ya. Nke a nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya, tụmadị na ọnụọgụ ndị mmadụ na-enweghị atụ na-eji ha eme ihe, nke ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa niile. Ihe omuma nke ndi na emeputa bu, n'ezie, odi, ma nke a dabere na ihe ojoo mere n'oge ogwu ogwu. Ọnụ ọgụgụ nke ule nlele dị ọtụtụ iri puku, usoro nke ihe na-erughị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 500, bụ ndị natara ugbu a ọgwụ mgbochi COVID-19 dị iche iche, nke nde mmadụ 135 natara kwa ọgwụ nke abụọ na-enweghị mkpa ikwu na ọnụ ọgụgụ ndị a na-eto kwa ụbọchị ka usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-aga n'ihu.
Gbasawanye ihe nlele ahụ na-eme ka ọdịdị nke mmetụta ọhụụ na-adịghị ahụkebe na-esiteghị n'oge ule ahụ kwe omume. E wezụga okwu ọjọọ kachasị njọ, a ga-achọpụtakwa ma mụọ mmetụta nke obere ọnụọgụ ọnụọgụ. Ka o sina dị, nlele dị mfe na njin ọchụchọ dị ka Google na-ajụ ajụjụ ndị dị ka, “Ebee ka m nwere ike ide ihe mgbaàmà m dị iche mgbe mgbochi COVID-19 gasịrị?” ma ọ bụ "obere ihe mgbaàmà mgbe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19" na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ adịghị adị ebe mmadụ nwere ike ịchọta ihe mgbaàmà ndị a na-atụghị anya ya na-atụghị anya mgbe ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 gasịrị.
Otu nwere ike ịchọta naanị isiokwu ole na ole dịka "Gịnị bụ mmetụta dị n'akụkụ ọgwụ ogwu AstraZeneca?" "Gịnị bụ mmetụta nke ọgwụ mgbochi Pfizer?" Ilere ha anya ngwa ngwa na-egosi na ewezuga mgbaàmà ndị kachasị ewu ewu, enwerekwa ole na ole dị obere. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ 4 n'ime mmadụ 600 kwuru na ha nwere nsogbu eriri afo mgbe ọgwụ mgbochi AstraZeneca gasịrị, mmetụta a na-ekwughị na ndepụta ndị enwere ike ịchọpụta n'oge ule ahụ. Ihe ihe yiri ya na - eme maka ogwu ogwu Pfizer-BioNTech. N'ime ihe karịrị 200 na-ekwu banyere mmetụta dị iche iche, 2 n'ime ha na-ekwupụtakwa nsogbu eriri afo, na 15 na-akọkwa nsị ahụ nke na ụfọdụ nọrọ ruo izu 2.
E jidere ụdị iri na abụọ maka ịgba ọtọ n'èzí na Dubai